Mark Zuckerberg ဟာကမ္ဘာမြေအပေါ်ဆဌမ-အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာ - သတင်း Rule
Mark Zuckerberg ဟာကမ္ဘာမြေအပေါ်ဆဌမ-အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာ
အဆိုပါ 31 နှစ်အရွယ်လည်း US မှာစတုတ္ထအချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာဖို့ Koch ကညီအစ်ကိုတွေမှီ, Facebook ရဲ့စံချိန်စတုတ္ထသုံးလပတ်အမြတ်အစွန်းအဖြစ် $ 47.5bn မှပိုက်ကွန်ကိုတန်ဖိုးရှိကိုရောက်စေ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဘီလျံနာ’ ကလပ်: Mark Zuckerberg ဟာကမ္ဘာမြေအပေါ်ဆဌမ-အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာ” New York မှာ Ellen Brait ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 29 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 16.53 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Facebook က CEO ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg ဟာယခုကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဆဌမ-အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အမေရိကန်အတွက်စတုတ္ထအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, အနိုင်ငံရေးအရသြဇာကော့ချ်ကိုညီအစျ၏ထက်သာလွန်သည်သူ၏ပိုက်ကွန်ကိုတန်ဖိုးရှိ, ထိုအရသိရသည် ဘလွန်းဘာ့ဂ်ဘီလျံနာအညွှန်းကိန်း.
Facebook ကဖော်ပြခဲ့သည် စံချိန်တင်ဝင်ငွေလေးပုံတပုံ, ရောင်းအားတက်နှင့်အတူ 52% ပိုပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းကနှစ်ဆထက်နှင့်ပိုက်ကွန်ကိုဝင်ငွေ. ကြာသပတေးနေ့က $ 6bn အားဖြင့် Zuckerberg ဟာစည်းစိမ်နှင်းဆီ, $ 47.5bn အားမိမိပိုက်ကွန်ကိုတန်ဖိုးရှိယူပြီး.
ချားလ်စ်ဒါဝိဒျသ Koch, အပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပကုမ္ပဏီ Koch Industries, run နှင့်ရီပတ်ဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုလူသိများကြသူ, အသီးအသီးတန်ဖိုးရှိ $ 45.9bn များမှာ.
ထိုအထဲက 100 အချမ်းသာဆုံးလူ, Zuckerberg ဟာယခုနှစ်သူတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်ကိုတန်ဖိုးရှိသည့်တိုးကြည့်ဖို့သာခုနစျပါးဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, ဘလွန်းဘာ့ဂ်ရဲ့အဆိုအရသိရသည် နေ့စဉ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး၏ 400 လူထု.
အဆိုပါ 31 နှစ်အရွယ်လူမှုရေးမီဒီယာက CEO ဆဲငါးခုအခြားဘီလျံနာနောက်ကွယ်မှထား: မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တည်ထောင်သူဘီလ်ဂိတ် ($78ဘီလီယံ), စပိန်ဖက်ရှင်စီးပွားရေးသမားသူဟာယင်း Ortega ($69.7ဘီလီယံ), အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Warren Buffett ($59.4ဘီလီယံ), အမေဇုံရဲ့ CEO က Jeff ဘီဇို့စ ($55.8ဘီလီယံ) နှင့်မက္ကဆီကန်စီးပွားရေး magnate Carlos Slim ($48.6ဘီလီယံ). ဒါပေမဲ့အတူတူ, ငါးဘီလျံနာဒီလ $ 19bn ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတော့ရှယ်ယာဆလိုက်မှုကြောင့်.
ပြီးခဲ့သည့်လက, သူ၏ပထမဦးဆုံးကလေးမှေးနှင့်အတူ, ဇူကာဘတ်ကိုအားမိမိကံဇာတာ၏အများဆုံးလှူဒါန်းကတိပြု ချမ်း Zuckerberg ဟာ Initiative, မိမိကိုမိမိနှင့်သူ၏ဇနီးတို့ကထူထောင်တဲ့ကုမ္ပဏီ, ပြစ်ကိလချန်း. အဆိုပါပဏာမခြေလှမ်းနိုင်ငံရေးအရပြောင်းလဲမှုအတွက်စည်းရုံးရန်ဦးမည်, fund philanthropic causes and invest in companies.
27722	0 အပိုဒ်, Ellen Brait, Facebook က, Koch brothers, Mark Zuckerberg ဟာ, သတင်း, နည်းပညာ, အမေရိကန်သတင်း, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← အဆိုပါ6အများစုမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အစားအစာများ အဘယ်ကြောင့်များနှင့်ဘယ်လိုကမာပုလဲ Make →